CEPE andiany fahatelo: 129 649 ny mpiadina any Toliara sy any Toamasina - ewa.mg
CEPE andiany fahatelo: 129 649 ny mpiadina any Toliara sy any Toamasina
News - CEPE andiany fahatelo: 129 649 ny mpiadina any Toliara sy any Toamasina
129 649 ny isan’ny mpiadina
amin’ny CEPE andiany fahatelo andraisan’ny mpiandina avy ao amin’ny
faritany Toliara sy i Toamasina anjara anio tontolo andro. 544 ny
foibem-panadinana handray azy ireo, ahitana efitrano 4 339. “Vonona
ny toeram-pandraisana, nandrarahana fanafody mamono tsimok’aretina
nefa tsy misy fiantraikany amin’ny fahasalaman’ny mpiadina”, hoy ny
Ho an’ny any Mahajanga I,
nahatratra 71,89% ny taham-pahafahana CEPE ary napetraka amin’ny
petadrindrina, omaly, ny lisitr’ireo afaka.
Momba ny fanomanana ny BEPC eto
amin’ny Cisco Antananarivo Renivohitra kosa, nivory, omaly, ireo
mpiandraikitra ny foibem-panadinana 31 hanomana ny lamina rehetra
ho an’ny 21 septambra ka hatramin’ny 24 septambra ho avy izao. Misy
mpiadina tavela any amin’ny faritra nefa miandry ny toromarika avy
any amin’ny minisitera ireo mpiandraikitra momba izay. Ny lalana
rahateo, efa misokatra ankoatra ny any Diana sy any Sava. Hapetraka
eny amin’ny biraon’ny mpitandro filaminana ny laza adina rehefa
nivoaka avy eny amin’ny Cnapmad ary tsy azo alaina raha tsy ny
L’article CEPE andiany fahatelo: 129 649 ny mpiadina any Toliara sy any Toamasina a été récupéré chez Newsmada.
Namaly ny hetahetan’ny maro ny filoha Rajoelina: hisy fiaramanidina ho any Ejypta andoavana 2. 200 000 Ar
Nanapa-kevitra ny filoha Rajoelina, omaly alina, manoloana ny fangatahan’ny Malagasy, hisy fiaramanidina manokana hitondra ireo mpijery baolina hanohana ny Barea amin’ny lalao hatrehiny, ny alahady izao any Ejypta. Vokatry ny fiaraha-miasa eo amin’ny kaompania Air Madagascar sy ny fanjakana izany mba hijeren’ny ankamaroan’ny Malagasy ny dingan’ny ampahavalon-dalana hatrehin’ny Barea. Manodidina ny 2 200 000 Ar ny vola aloan’ireo handeha ka efa tafiditra ao anatin’izany ny tapakilan’ny fiaramanidina, ny sakafo sy ny fitaterana mihazo ny any amin’ny kianjan’i Alexandrie. Efa misokatra manomboka anio, ny famandrihan-toerana sy ny fisoratana anarana eny amin’ny biraon’ny Air Madagascar rehetra. Hanamora ny fikarakarana ny « Visa » sy ny taratasy rehetra ilaina kosa ny fanjakana.Synèse R. L’article Namaly ny hetahetan’ny maro ny filoha Rajoelina: hisy fiaramanidina ho any Ejypta andoavana 2. 200 000 Ar a été récupéré chez Newsmada.
« Isaorana ireo kandidà sy ny mpomba azy avy nitandro toy ny anakandriamaso ny fitoniana. Efa ao anatin’ny fanatonana ireo kandidà izahay izao. Mangataka fihaonana aminy, hifampiresahana hisian’ny fitoniana. Ezahinay mba hifampiresaka izy ireo. » hoy ny filohan’ny CFM, Maka Alphonse, teny Ambohidahy, afakomaly. Didy no navoakan’ny HCC tamin’ny voka-pifidianana ofisialy. Ny dikan’izany, miara-manaiky an’iny isika raha tany tan-dalàna. Na izany na tsy izany, araka ny voalazan’ny HCC: maro ireo tsy fahatomombanana tamin’ny fanomanana iny fifidianana iny. Koa tsy azo odian-tsy hita izay ho an’ny rafi-panjakana, ny Ceni, manomana ny fifidianana: hisintona lesona tamin’iny fihodinana voalohany iny. Mba hanarenana ny tsy mety izany: ny amin’ireo kara-pifidianana tsy mbola voazara, ohatra. Azo sorohina tanteraka ny izany. Tsy azo kitihina kosa ny lisi-pifidianana na misy aza ny fanavaozana isan-taona, manomboka ny 1 desambra izao ka hatramin’ny 15 mey 2019. R. Nd. L’article Hampihaonin’ny CFM Rajoelina sy Ravalomanana a été récupéré chez Newsmada.
News - Santé - Triatra
Boriborintany faha-6 : Zaza roa matin’ny kitrotro
Mbola mirongatra ny aretina eto an-drenivohitra. Tsy mitsaha- mitombo ireo voany sy ireo namoy ny ainy. Ny zoma lasa teo, zaza iray no voamarina araka ny tatitry ny kaomini Antananarivo Renivohitra fa namoy ny ainy, vokatry ny aretina kitrotro teny amin’ny fokontany Ambohimiadana Atsimo, ao anatin’ny boriborintany faha-6. Araka ny voalazan’ireo mponina teny amin’ny manodidina iny ihany dia efa ho roa amin’io ny zazakely maty voan’ny aretina kitrotro teny amin’iny toerana iny, nandritra ny herinandro izay. Manoloana io tranga io, tsy nitazam-potsiny ny kaomina fa avy hatrany dia nandray ny andraikiny tamin’ny fandefasana ny ekipa avy tao amin’ny amin’ny BMH (Bureau municipal d’Hygiène), nandraraka ranom-panafody, teny amin’ny toerana manodidina ny trano fonenan’ny niharam-boina. Ny tanjona dia mba hamonoana ireo bibikely sy ny otrik’aretina mety hiparitaka manodidina ny trano, sy hitsinjovana hatrany ny fahasalaman’ny daholobe. Ny minisiteran’ny Fahasalamam-bahoaka ihany koa etsy ankilan’izay, hanantanteraka fanadiovana faobe manoloana ny firongatry ny valanaretina, na ny pesta izany, na ny kitrotro. Tsara ho fantatry ny tsirairay fa vokatry ny loto ny mampirongatra ny aretina, ka antony handraisana izay fanapahan-kevitra izay ho fanentanana ny olona hadio. “Matetika vokatry ny loto ny aretina. Rehefa mirongatra nefa ny aretina dia ny minisiteran’ny Fahasalamana ihany no sahirana sy omena tsiny matetika. Noho izay, nandray andraikitra tandrify azy mba hiadiana amin’ny loto izahay amin’io andron’ny fanadiovana io. Ny ivelany sy anatiny toeram-piasana sy ny toeram-pitsaboana no diovina amin’io, izay manomboka eo amin’ny CSB1 hatreny amin’ny hopitaly lehibe manerana ny Nosy. Aseho amin’ny hetsika io fa tsy voatery mitsabo ihany no ataon’ny minisiteran’ny Fahasalamana fa miezaka koa izy miaro ny aretina ankoatran’ ny vakisiny”, hoy ny talen’ny fampiroboroboana ny fahasalamana eo anivon’ny minisiteran’ny Fahasalamana, Dr Rakotoarivony Manitra. Tsy hijanona eo anefa fa hatao isaka ny faran’ny volana ny hetsika fanadiovana, ary hanentanana ireo fikambanana tsy miankina, ny mponina, ny minisitera isan-tsokajiny. Marihina fa efa misy faritra efa manao an’io foana toa ny any Menabe ary tsy vitan’ny hopitaly sy ny toeram-piasana ihany no diovina fa hatreny amin’ny manodidina. Laurena Nany L’article Boriborintany faha-6 : Zaza roa matin’ny kitrotro est apparu en premier sur .L’article Boriborintany faha-6 : Zaza roa matin’ny kitrotro a été récupéré chez Triatra.
Notanterahina tao Andamboly any amin’ ny Distrika Tsihombe, tamin’ity herinandro ity ny lanonana fanolorana ny milina mpamokatra herinaratra lehibe. Manana tanjaka 165 kw sy 265 kw miaraka amin’ ireo jiro sy kojakoja maro ireto fitaovana ireto. Nanolotra izany tany an-toerana ny minisitry ny Angovo sy ny Akoranafo, Ramarolahy Christian, nisolo tena ny filohan’ ny Repoblika. Anisan’ny nanotrona izany koa ny governoran’ ny faritra Androy.Niavaka kosa anefa ny lahatenin’ny depiote Masy Goulamaly fa tsy mba nahenoana na niresaka momba ireo fitaovana vao azo ireo. Efa saika tsy tonga izy raha nandrasana nandritra ny ora maromaro ary efa tsy anisan’ ireo nandray fitenenana. Nandray ny anjara fitenenany taorian’izany ny governor, saingy efa lasa nandeha ity solombavambahoaka ity.Synèse R.L’article Fampandrosoana eny ifotony: tonga ny milina mpamokatra herinaratra eny Tsihombe a été récupéré chez Newsmada.
Ceni : « Amin’ny 10 janoary ny voka-pifidianana ofisialin’ny HCC »
Ao anatin’ny fampielezan-kevitra izao… Hanao ahoana ny fifidianana? Amin’ny 10 janoary ny voka-pifidianana ofisialin’ny HCC, raha ny nambaran’ny eo anivon’ny Ceni. « Maniry ny Ceni mba hatao fanomezana ho an’ny vahoaka malagasy amin’ny faran’ny taona ny voka-pifidianana vonjimaika feno amin’ny fifidianana filohan’ny Repoblika. » Io ny nambaran’ny filoha lefitry ny Ceni, Rakotonarivo Thierry, afakomaly, momba ny famoahana ny voka-pifidianana vonjimaika feno amin’ny fifidianana filohan’ny Repoblika fihodinana faharoa. Manahirana ny hamory olona amin’ny 1 janoary 2019. Koa mieritreritra ny Ceni fa havoaka ny 31 desambra izay voka-pifidianana izay. Mety ho alohan’ny 31 desambra aza izany, raha mizotra araka ny tokony ho izy ny zava-drehetra. Izay no irina. Ny 19 desambra ny fihodinana faharoa. Manana dimy andro ny eny anivon’ny sampana mpanisa vato (SRMV) eny anivon’ny distrika, fa hatramin’ny 24 desambra ny fe-potoana farany tsy maintsy hahatongavan’ny antontan-taratasy mirakitra ny voka-pifidianana avy any amin’ny birao fandatsaham-bato eny amin’ny SRMV. Tsy maintsy aterin’ny SRMV eny anivon’ny distrika mankeny amin’ny Ceni foibe, Antananarivo, ireo voka-pifidianana ireo ny 25 desambra. Malalaka ny famindram-pahefana « Manana fito andro manomboka amin’io 25 desambra io ny Ceni foibe hamoahana ny voka-pifidianana vonjimaika feno », hoy izy. Raha kajiana izay, ny 1 janoary 2019 no fe-potoana farany hamoahan’ny Ceni izay voka-pifidianana vonjimaika feno izay. Sivy andro aoriana izay kosa no tokony hamoahan’ny Fitsarana avo momba ny lalàmpanorenana (HCC) ny voka-pifidianana ofisialy. Farafahelany ny 10 janoary 2019 izany, na aoriana kelin’izay raha tsy isaina ny andro tsy fiasana toy tamin’ny namoahana ny voka-pifidianana ofisialy, fihodinana voalohany. Misy tsara ny fotoana, hatramin’ny 25 janoary, hanomanana ny famindram-pahefana eo amin’ny filohan’ny Repoblika teo aloha, Rajaonarimampianina, amin’ny filohan’ny Repoblika vaovao voafidy. Malalaka tsara izay ary voahaja ny voalazan’ny lalàmpanorenana amin’izany. R.Nd. L’article Ceni : « Amin’ny 10 janoary ny voka-pifidianana ofisialin’ny HCC » a été récupéré chez Newsmada.
Ambohipo : Jiolahy tratra, niharan’ny fitsaram-bahoaka
Teo am-panaovana ny asa ratsiny mihitsy ity mpamaky trano no nisy nahatsikaritra, teny amin’iny faritra Ambohipo iny. Nenjehana avy hatrany ary tsy ela akory dia voasambotra ilay olon-dratsy. Raikitra ny daroka sy ny vono. Ny sabotsy lasa teo nitrangan’ity trangana fitsaram-bahoaka ity teny an-toerana. Raha mbola teo am-pisokirana trano mantsy izy no hitan’ny fokonolona. Niantso vonjy rahateo ny tompon’ny trano ary vetivety dia niely ny vaovao. Nitangorona ny olona ary nifanome tanana tamin’ny fisamborana ity olon-dratsy ity teny amin’iny faritra iny. Tetsy an-danin’izay dia nisy tamin’ireo mponina no niantso avy hatrany ny pôlisy. Nony nigadona teny an-toerana moa ireto farany dia efa voasambotry ny fokonolona ity mpamaky trano, izay tsy afa-niala teo ambany hatezereran’ireto farany. Raha nisy kely foana dia efa ny ainy no nanefa tamin’izany. Soa ihany araka izany fa tonga ara-potoana ireto mpitandro filaminana ireto. Nitondra azy niala teo. Rehefa avy notsaboina sy natao famotorana moa ny lehilahy dia natolotra teny anivon’ny Fampanoavana, ary nampidirina am-pona vonjimaika, miandry ny fotoam-pitsaràna azy. m.L L’article Ambohipo : Jiolahy tratra, niharan’ny fitsaram-bahoaka a été récupéré chez Midi Madagasikara.